हामीले इमरान खानलाई हेरेर थुक निल्नुपर्ने, १/१ दिनलाई उपयोगी बनाउन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले किन सक्दैनन् ? « News24 : Premium News Channel
काठमाडाैँ । अर्काको देशको नेतृत्वको तारिफ गर्नु साटो आफ्नो देशको नेतृत्वको तारिफ गर्न पाए क्या मज्जा आउँथ्यो । तर त्यस्तो अवसर खै किन हो, हामीलाई प्राप्त हुन सकेको छैन । यो सरकारको शुरुवाती दिनमा त्यो छाँट पनि नदेखिएको होइन तर हात्ती आउँदा आउँदै फुस्सा भयो । तर फुस्सा भै हाल्या पनि नभनौँ । हात्ती आउँदै गरेको पनि हुन सक्छ ।
सरकारसँग अझै ४ वर्ष छ । २ पार्टी अध्यक्षबीचको भागबन्डालाई मान्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग डेढ वर्ष छ । ४ वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री बनुन् शुभकामना छ तर डेढ वर्ष मात्र बाँकी छ भने पनि यो समय कम होइन । अन्य देशका नेतृत्वको कुरा गरिहाले ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा कसैकसैले भन्न सक्दछन् कि यति चाँडै मुल्याङकन नगराैँ । तर अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ कि द मर्नीङ शो द डे विहानीले दिको संकेत त गर्छ नै गर्छ । शायद ६/७ महिना मात्र भयो कि इमारान खानले कुर्सी समालेको । केहि दिन अघि उनि अमेरीकाको भ्रमणबाट फर्कीदा पाकिस्तानमा मध्यरात भैसकेको थियो ।
मध्यरातमा आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न हजारौँ जनता सडकमा उत्रिन्छन् भने मान्नै पर्छ उनमा केही खास छ । इमारानको उदयसँगै पाकिस्तानका जेलहरु ठु्ला भ्रष्टाचारीहरुबाट भरीन थालेका छन् । सत्ता सम्हालेको ६ महिनामा २ जना पुर्व प्रधानमन्त्री लाई जेल हाल्न एउटै कुरा चाहिन्छ, मुटु । त्यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा वासीङटन डिसिमा इमरान खानले दिएको मन्तव्य भित्र थियो । जसलाई प्रस्तुत गर्न सान्दर्भीक ठान्दछु ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका पुर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफका बिषयमा टिप्पणी गर्दै उनले भने नवाज सरिफ जेलभित्र एसीको सुविधा लिइरहेका छन्, घरबाट ल्याएको खाना खाइरहेका छन । एउटा भ्रष्टाचारीलाई यो सुविधा दिन कदापी सकिदैन । म पाकिस्तान फर्केर उनको एसी हटाउँछु र घरबाट खाना ल्याउनदिने काम बन्द गर्छु । उनले अर्को कुरा पनि बताए कि केही भ्रष्टाचारीहरु विरामी परेको नाटक गरेर अस्पतालमा आनन्दले सुतिरहेका छन्, तिनलाई पनि जेलमै फिर्ता लगेर उपचारको व्यवस्था गर्छु ।
आजको दिनमा हामीले, हाम्रो जस्तो भ्रष्टाचारले थिचेर मराणसन्न परेको मुलुकमा सरकार प्रमुखबाट यति पनि अपेक्षा नगर्ने ? भ्रष्टाचार र अन्य वेथितिका हिसाबले पाकिस्तान र नेपालको अवस्था उस्तै छ ।
अझ पाकिस्तानलाई त आंतकवादले गर्दा हामीलाई भन्दा ग्राहो परिस्थीतिको सामना गर्नु परेको छ । क्रीकेटरका रुपमा सुपरस्टार लक्जरीयस लाइफ बाँचेका, संसार देखेका घुमेका, करोडौँ कमाएका इमारानलाई के जरुरत थियो, प्रधानमन्त्रीको सरकारी भवनलाई युनिभर्सीर्टी बनाएर आँफु सानो घरमा बस्न ।गर्न चाहनेको छाँटकाट नै वेग्लै हुन्छ । धेरै राजनीतिज्ञको बुझाइ र भनाइ छ कि हाम्रो दुर्भाग्य भारत जस्तो छिमेकी हुनु हो, ह्वाट एबाउट पाकिस्तान ? भारत छिमेकी हुनु नै सबै भन्दा ठुलो पिडा हो भने त्यो पिडा हामीलाई भन्दा बढी पाकिस्तानलाइ छ ।
भारत,चाइना, अमेरीका इयुलाई दोष देखाएर कतिन्जेल यो मुलुकलाई दुखमा राख्ने ? त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि धेरै केही गर्नै पर्दैन। ३/४ वटा काम गर्ने आँट मात्र गरुन उनलाई आजीवन प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यकता होइन जनता सडकमा उर्लिन्छन् । भ्याट छली र करछली गर्ने ठुला कम्पनीलाई लेकिन, किन्तु, बट, परन्तु, तर नभनी कारवाही, वाइडबढी खरिदमा घोटाला भएको छ, घोटाला गर्नेलाई आँखा बन्द गरेर कारवाही गर्ने, विपक्षी दलको ठुलै नेता भए त टन्टै साफ आफ्नै दलका ठुलाठुला नेता भएपनि आँखा बन्द गरिदिने, एकैचोटी जेल छिरेपछी ला.. भनिदिने ।
तेस्रो, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गुरुङ, ढकाल, पौडेल, नेपाल, खनाल केही नहेरी छापामार शैलीमै आँट गरेर स्ट्राइक गर्ने । अहिलेलाई यत्ती मात्रै काम गर्न सक्ने साहस प्रधानमन्त्रीले राखे, नेपालमा इमरानको चर्चा मैले नेशनल टेलिभिजनमा गरेको जसरी पाकिस्तान, युक्रेन,भुटानजस्ता देशमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको बयान त्यहाका टेलिभिजनकर्मीले गर्ने छन् ।
कार्यकाल ४ वर्ष बाँकी होला वा अर्का अध्यक्षसँग भएको भनिएको लिखित मौखीक सहमती अनुसार डेढ वर्ष मात्रै किन बाँकी नहोस् । एक एक दिनलाई उपयोगी बनाउन सक्ने क्षमता हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राख्नै पर्छ । बालुवाटार र सिंहदरबारमा फोटो त धेरैको छ तर जनताको मनमा फोटो राख्न केहिले पनि रोकेको छैन ।
दुई तिहाइको सरकार, चट्टानी अडान लिन सक्ने प्रधानमन्त्री, बालबच्चाको लागि सम्पत्ती कमाइदिन नपर्ने, बोनसमा प्राप्त जीवन । यस्तो गोल्डेन मात्रै होइन डाइमण्ड अवसर यो देशले कहिल्यै पाउँदैन । यस्तो डाइमण्ड अवसर पाउँदा पनि हामीले इमरान खानलाई हेरेर थुक निल्नुपर्ने ? लौन प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति उक्साउन पर्यो हो सल्लाहकार महोदयहरु ।